चम्सुरिका भाइरल र एकदमै राम्रा टिकटकहरु ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
July 23, 2021 AdminLeaveaComment on चम्सुरिका भाइरल र एकदमै राम्रा टिकटकहरु ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
कलाकारिता क्षेत्रको एकदमै अनमोल हिरा मध्य कि एकहुन पल्पसा डङ्गोल जो मेरि बास्सै नामक सिरियलबाट आफुलाई चम्सुरि उपनामले सबै नेपाली दाजुभाई तथा दिदिबहिनिको मन मस्तिष्क र मुटुमा छाउन सफल र एकदमै चर्चित कलाकार हुन् । उनी मिस नेपाल १९९५ मा पाचौ प्रतिस्पर्धि मध्ये एक हुन् । उनका दुबै मृगौलाहरु फेल भएका छन् ।
उनी अहिले टिचिङ हस्पिटलमा उपचाररत छिन् । आफू अब सायदै नबाच्ने र आफुलाई बचाइदिन भन्दै धरधरि रुदै सारा नेपालि माझ उनिले गुहार मागेकि छिन् । लगभक पाच बर्षबाट नै अत्याधिक बि रामी परेर थ’लिएकि उनी अहिले पनि आफ्नो जिवनबाट पुरै हार खाएर अन्तत यसरी अस्पतालको बेडमा ल ड्न बि बस छिन् ।
उनका दुबै मृगौला फे ल भएसगै उनलाई अरु कसैको मृगौला चाहिएको छ । दानी कोहि भए उपलब्ध गराईदिन हामी अनुरोध गर्दछौ । आफुलाई पैसा नभई मृगौला चाहिएको र फेरि मेरि बास्सैमा चम्सुरि भएर खेल्ने रहर भएको भन्दै उनि धरधरि रो इन । अहिले उनलाई अस्पतालमा भेट्न जितु नेपाल मुन्द्रे,कुन्जना घिमिरे सुन्तलि र धेरै कलाकार हरु पुगेका छन् ।
हेर्नुस् भिडियो सामाग्री ! सन् १९९५ मा मिस नेपालमा भाग लिएपछि उनको कलाकारिता क्षेत्रको श्रि गणेश हुन्छ । उनी टप पाच कन्डेसेटेन्टसम्म छानिन्छिन र उत्कृष्ट पहिरनको उपाधि पनि जित्छिन् । काठमाडौको कृतिपुरमा नेवार परिवारमा जन्मिएकि उनी निकै राम्रो नृत्य गर्छिन् । नृत्यमै पटक पटक पाएको अवार्ड र तारिफहरुलेनै गर्दा उनिलाई कला क्षेत्रमा डोर्याएको हो ।
चेलिको आवाज नामक सिरियल उनको पहिलो सिरियल थियो र सो सिरियल गर्दैगर्दा मेलिना मानन्धरसग बिज्ञापन गर्ने अवसर पाइसकेपछि उनको हाइट एकदमै बढेको थियो । उनले दर्जनौ टेलिचलचित्रमा काम गरकि छिन् मेरि बास्सै ,सेन्टि भाइरस,एसएलसि,भरोसा,मिस्टर फन्टुस् लगायत चलचित्रमा उनले अभिनय गरिन् ।
दृष्टि नामक टेलिचलचित्र भने पल्पसा आफैले निर्माण र निर्माता गरेको टेलिचलचित्र हो । करिब तीन दर्जन भन्दा बढि चलचित्रमा उनले अभिनय गरिसकेकि छिन् । दर्जनौ म्युजिक भिडियोमा पनि उनको कलाकारिता रहेको छ । हास्य टेलिश्रृखंला ‘मेरी बास्सै’ की चम्सुरी अर्थात कलाकार पल्पसा डंगोल अस्पताल भर्ना भएकी छन् ।
मृगौला सम्बन्धी समस्याका कारण उनी केही दिन अगाडि महाराजगञ्ज स्थित टिचिङ अस्पतालमा भर्ना भएकी हुन् । सो समस्याका कारण उनी एक महिना अस्पताल भर्ना भएर केही दिन अगाडि मात्र घर फर्किएकी थिइन् । तर घर फर्के लगत्तै स्वास्थ्यमा फेरि समस्या देखिएकोले उनलाई पुनः अस्पताल भर्ना गरिएको हो ।
बिगत ५ बर्ष देखि मृगौलामा समस्या रहेकी पल्पसालार्ई यति बेला टिचिङ अस्पतालको ३०५ नम्बरको बेडमा भर्ना गरेर प्ररम्भिक उपचार थालीएको छ । डंगोलको मृगौला प्रत्यारोपण गर्नु पर्ने अवस्था रहेको अस्पताल श्रोतले जानकारी दिएको छ । इन्द्रेणी कार्यक्रम संचालक कृष्ण कंडेलले अस्पतालमा पुगेर उहाँको अवस्था बुझेर रु, ७० हजार सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्नु भएको छ ।
यस्तै राष्ट्रिय संगितकर्मी संघका महासचिव विक्रम जंग शाहले ब्यक्तीगत रु, १० हजार सहयोग गर्नु भएको छ भने अन्य धरै कलाकारहरुले त्यहाँ पुगेर इन्द्रेणी मार्फत सहयोग गर्न अपिल गरेका छन् । पल्पसा डंगोलका बि राम अगावै बनाइएका टिकटकहरु अहिले सामाजिक संजालभरि एकदमै भाइरल छन् ।पल्पसा यानकि चम्सुरिको नाचमा रुचिसगै बनाइएका यी भिडियोहरु हेर्दै गर्दा जो कोहि भावुक भैरहेका छन् किनकि अतीत र वर्तमान अहिले नितान्त एकदमै फरक छ । हेर्नुहोस् उनका केही टिकटक भिडियोहरुः
आजको राशिफल हे’र्नुहोस् : मिति २०७८ साल साउन २३ गते शनिबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ अगष्ट ०७ तारिख